“Ha iga qoslin xaalad aan qoslo kuma jiree” – Jose Mourinho
HomeWararka Maanta“Ha iga qoslin xaalad aan qoslo kuma jiree” – Jose Mourinho
Kooxda Chelsea ayaa la qabtay oo 1-1 ay isla dhaafi waayeen naadiga Burnley oo marti ugu ahayd garoonka caanka ah ee The Blues, Stamford Bridge.
Branislav Ivanovic ayaa goolkiisii labaad ee uu todobaad gudihii u dhaliyo kooxda tababare Jose Mourinho hogaanka ugu dhiibay daqiiqadii 14 aad ee ciyaarta, laakiin Laacibka difaaca kooxda Burnley ee Ben Mee ayaa ciyaarta barbar dhac ku soo celiyey 10 daqiiqo markii ay ciyaarta ka hadhsanaayeen.
Toban daqiiqo oo kaliya markii uu garoonka ka sii maqnaa Nemanja Matic oo casaan toos ah garoonka lagaga saaray kadib markii uu la murmay ama jiid jiitay ciyaaryahan Ashley Barnes ayay ahayd marka Chelsea goolka bareejaha ah laga dhaliyey.
Wallow ay u cuntami weyday casaanka Matic , tababare Mourinho hadana wuxuu ku adkaystay inaanay jirin wax racfaan ah oo ay ka qaadanayaan.
“Maya [Casaanku xaalada waxba kama bedelin]. Ciyaarta afar dhacdo ayaa ka dhex dhacay halkaas ayaanad ka hellaysaa war aad qorto maanta . daqiiqadihii 30, 33, 43 iyo 69. Su’aal kalena ima weydiin kartid, gurigaagii ama xafiiskaagii dib ugu noqo, dib u daawo xiliyadaas aan kuu tilmaamay kadibna war ka dhigo, Aniga waad ogtihiin run sheeg la iima ogola oo wey adag tahay” ayuu Mourinho ku yidhi warfidiyeeno ciyaarta kadib Cod duubaha la barbar orday.
Mar la weydiiyey bal sida uu u arko casaankii laga siiyey ciyaaryahan Matic, Mourinho wuxuu kaga jawaabay: “Waligaa ma aragtay Chelsea oo racfaan ay qaadatay ku guuleysatay?”
“Waxba kama sheegi karo sidii wax u dhaceen. Waa la i ganaaxayaa haddii aan ka sii faaloodo xaaladan, aniguna ma rabo in ganaax igu dhaco. Waxaan rumaysanahay inay jiraan kuwo waxya doonaan iigu yeedha, Nimanyohow idinku waxaad tihiin daacad iyo rag mihnadooda ku fiican, qolyahaa waxay doonaan dadka ugu yeedha ayaa runta khalkhal galliya. Waxaan run ahaan aaminsanahay inaad dhamaantiin daacad tihiin .” ayuu Jose saxafiyiintii ku beer laxawsaday’.
Juventus Oo Iska Xaadirisay Finalka Champions League
Amiens 0-2 Paris Saint Germain – All Goals & Highlights